Xalka Gaaska Warshadaha
ACTION waxay nafteeda u huraysaa bixinta xalka ugu badbaadsan uguna waxtarka badan ee gaaska lagu ogaanayo hababka sida saliidda iyo gaasta macdanta, sifaynta batroolka, dhamaystirka batroolka, daaweynta gaaska dabiiciga ah, kaydinta saliidda & gaaska iyo gaadiidka warshadaha batroolka iyo gaaska dabiiciga ah.Xog ururinta software-ka dhinaca-dhamaadka hore ee ganacsiga waxay ururin kartaa noocyada kala duwan ee xogta dareenka iyadoo la adeegsanayo wacyigelinta xogta.Kadibna xogta la ururiyay ayaa lagu farsameeyaa marka hore aaladda gudbinta IoT waxaana loo diraa kaydka dhexe ee IoT gateway.Ugu dambeyntii, waxaa lagu farsameeyaa oo lagu muujiyaa khariidadda GIS ama iyada oo loo marayo hawlaha kale ee xarunta.
Si aad si buuxda u isticmaasho qiimaha xogta iyo madal, codsiyada dhinaca mobile intelligent, oo ay ku jiraan IOS iyo dhufto ee Android, ayaa la sii horumariyo si ay u sameeyaan madal lagu dabaqi karo in terminal dheeraad ah oo ay bixiyaan adeegyo ku habboon oo qiimo leh macaamiisha.Xalka iyo alaabooyinka ayaa si guul leh loogu dabaqay macaamiisha soo socota:
Taxinan Oilfield, Xinjiang Tuha Oilfield, Tarim Saliida, Karamay Oilfield, Shaanxi Changqing Oilfield, He'nan Puyang Saliida, PetroChina Southwest Saliida iyo Laanta Gaas, PetroChina Xafiiska Maamulka Galbeedka Shiinaha, Qinghai Saliida, Liaohe Saliida, Panjin Petrochemical, Yankuang Coal Kiimikada Kooxda iyo Shanxi Luan, iwm.
▶ Nidaamka ogaanshaha gaaska wuxuu muujin karaa maamul dhexe oo xooggan iyo awoodaha xakamaynta aagga iyada oo loo marayo habaynta nidaamka;
▶ Nidaamku waxa uu xaqiijin karaa xidhiidhka ka dhexeeya kombuyuutarka martida loo yahay iyo dhawr-ilaaliyeyaal badan;
▶ Nidaamku wuxuu si xooggan ula socon karaa una maamuli karaa xaaladaha qalabka awoodda badan;
▶ Nidaamku waxa uu la socon karaa xogta fiirsashada iyo heerka qalabka ee dhammaan lakabyada xakamaynta gaaska ee aagagga oo dhan si ku salaysan wakhtiga dhabta ah;
▶ Nidaamku waxa uu leeyahay saaxiibtinimada man-mashiinka garaafyada hawlgalka garaafyada kaas oo muujin kara aaladaha dhammaan lakabyada xakamaynta gaaska ee dhammaan meelaha qaab jaantusyada socodka;
▶ Nidaamku waxa uu xaqiijin karaa soo saarista calaamada kontoroolka fog ee gacanta/si toos ah iyo bilawga fogaanta/joojinta qalabka kontoroolka dibadda ee lakabka xakamaynta alaarmiga ee dhammaan meelaha;
▶ Nidaamku wuxuu leeyahay daawashada xogta waqtiga dhabta ah iyo xogta taariikhiga ah iyo kaydinta macluumaadka iyo hawlaha raadinta.Xogta iyo macluumaadka waxaa ka mid ah diiradda gaaska, macluumaadka digniinta iyo macluumaadka guuldarada;
▶ Nidaamku waxa kale oo uu leeyahay xog-waqtiga dhabta ah/taariikhiga ah iyo liiska macluumaadka iyo hawlaha raadinta qalooca iyo sidoo kale xogta taariikhiga ah iyo warbixinta macluumaadka dhoofinta iyo daabacaadda;
▶ Isticmaalayaasha hawlgalinta waxaa lagu maareeyaa awood heerar badan si loo dammaanad qaado maamulka nidaamka iyo hawlgallada badbaadada leh;
▶ Nidaamku waxa uu xaqiijin karaa isgaadhsiinta bilaa-waayirka ah ee lakabyada xakamaynta gaaska aagga;
▶ Nidaamku waxa uu leeyahay shaqo siidaynta shabakada onlaynka ah.Kumbuyuutarrada kale waxay ku booqan karaan nidaamka iyaga oo maraya boggaga internetka si ay u ogaadaan kormeerka kombuyuutarrada badan ee isku mar ah.
qalabka gaaska go'an, lpg gaaska ogaanshaha, gaaska ololi kara, Alaarmiga gaaska gubanaya, qalabka gaaska, Shiine gaaska baadhe,